Umbono wakho ubalulekile | Kusuka kuLinux
Umbono wakho ubalulekile
Kusukela kulo mzuzu sizoqala isigaba esisha ku- <° I-Linux enegama: Umbono wakho ubalulekile.
Kuyo sizoshicilela ama-imeyili abanye abasebenzisi abathumele izihloko eziphakamisayo kubo ifomu lokuxhumana, ngenhloso yokuthi sizishicilele lapha kubhulogi. Umqondo walesi sigaba ukwazisa esidlangalaleni ukuthi sicabanga ngendaba umsebenzisi asiphakamisa yona nokuthi singakwazi ukuyifeza noma cha.
Lokhu akusho ukuthi siphendula wonke ama-imeyili athunyelwe, futhi akusho ukuthi asizishicileli izindatshana ezihlobene neziphakamiso ezikulawo ma-imeyili. Ucabangani ngakho? Sizokwamukela ngenjabulo noma yikuphi ukugxekwa noma isiphakamiso salesi sigaba ngamazwana.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Umbono wakho ubalulekile
Engikucabangayo ukuthi uma ungafaki konke abakuthumelayo kukhona imiphetho hahahahahahahaha
Kodwa yikuphi okubi engikwenzile emhlabeni ukukugcina uthinta amabhola akho ngaso sonke isikhathi? I-LOL
Inqobo nje uma umnika intokozo yokumlalela futhi kubonakale sengathi uyakukhathaza, uzobe wenza nje lokho umngane wethu akufunayo LOL !!!!
Ah woza, kufanele ube nesipiliyoni sokubhekana nama-troll, ukubhekana nabo kuyinto elula kunazo zonke emhlabeni HAHAHAHAHA.
Indlela engangisebenza ngayo kwakuwukubahleka kancane bese ngibavimbela haha
Ngicabanga ukuthi umbono muhle. Ngiyethemba ukuthatha isikhashana ukuphakamisa imibuzo ethile noma izingqinamba ezithile.
ILibreOffice izofinyelela emafwini, i-iOS ne-Android